Waqtiga La Qabanaayo Doorashada Afhayeenka Baarlamaanka Federaalka oo La Shaaciyey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Waqtiga La Qabanaayo Doorashada Afhayeenka Baarlamaanka Federaalka oo La Shaaciyey
Waqtiga La Qabanaayo Doorashada Afhayeenka Baarlamaanka Federaalka oo La Shaaciyey
May 25, 2010 - By: Hanad Askar
Guddiga doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta sheegay waqtiga loo cayimey in la doorto shirguddoonka Baarlamaanka.
Maxamed Adan Waayeel oo ah afhayeenka guddiga ayaa maanta warbaahinta u sheegay in maalinta berri ah ay ku egtahay qabashada dalabaadka guddoomiyaha, sidoo kale waxaa isla berri la dhamaystiraya dhammaan wixii ay u baahneyd doorashadu.
Doorashada Afhayeenka Baarlamaanka ayaa maalinta 28.05.2010 ee ku beegan Jimcada si toos ah uga dhici doonta guriga Umadda, sidoo kale maalinta Sabtida ah ee 29.05.2010 ayaa la dooran doona labada ku xigeen, maadaama tirada codadku ay badan tahay ayna dhici karto in ay marto ilaa laba wareeg ayaa looga dhigey in la qabto laba maalmood.
Musharaxiinta la saadaalinaayo in ay ku guuleystaan ayaa waxaa ka mid ah Shariif Xassan Shiikh Adan Raysalwasaare xigeenka Dawladda oo maalintii shalay iska casiley Wasiirka Maaliyadda, isla markaana si rasmi ah ugu gudbiyey guddiga doorashada dalabkiisa.
Dhanka kale Guddoomiyekusigeenkii labaad ee la sheegay in waqtigu ka dhacay Prof. Dalaxa ayaa weli ku adkeysanaaya in aan booskiisa loo tartamin ee uu yahay sharci, isla markaana aanu is casilin, laakiin ku xigeenkii labaad ee is casiley Cismaan Cilmi Boqorre ayaa ka mid ah mushariixnta isu diiwaan geliyey isla booskii uu iska casiley.
Doorashada ayaa ku soo aadeysa iyada oo ay magaalada Muqdisho dagaalo ka socdaan, Xarkada Al-shabaab ayaa wacad ku martey in ay qabsanayaan maalmaha soo socda madaxtooyada Muqdisho, nin u hadley al-Shabaab ayaa sheegay in dagaaladii u danbeeyey ay ku qabsadeen masaafo u dhxeysa 500 – 1000mitir.